Ihe ị ga-ahụ na Cala Llombard, Mallorca | Akụkọ Njem
La Cala Llombards osimiri dị na Mallorca, na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ, obere kilomita ole na ole site na Santanyí na n'ime obodo a. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịhụ ihe na Mallorca, ọ bụ kpọmkwem ọnụ ọgụgụ buru ibu nke o nwere, nke na-adịkarị obere ma maa mma. Akinggagharị agagharị nke kachasị mma bụ ihe dị mkpa mgbe anyị gara agwaetiti a.
Na agwaetiti Mallorca anyị nwere ọtụtụ ihe ime ma otu n'ime ndị kasị ewu ewu na-enweghị obi abụọ mejupụtara ileta osimiri ya kachasị mma na coves, nke nwere amara Mediterranean pụrụ iche. Oghere ndị a, dị ka Cala Llombards, nwere mmiri turquoise ma nye anyị obere ebe obibi anyị ga-anọ ụbọchị.
1 Ihe ikwesiri ima banyere Cala Llombard
2 Ihe na-atọ ụtọ na Cala Llombard
3 Kedu ihe ị ga-ahụ na nso Cala Llombard
3.2 Mondragó park nkịtị
3.3 Dị nso coves
Ihe ikwesiri ima banyere Cala Llombard
Na Mallorca enwere ọtụtụ ndị mara mma coves ndị kwesịrị ileta na Cala Llombard bụ otu n'ime ha. Cove a nwere ụfọdụ njirimara. Ọ na-enye ebe a na-adọba ụgbọala dị mfe na nso mpaghara aja. Ọ bụ ya mere ọ ji achọ ọtụtụ ezinụlọ agụụ iji anwụ na-acha anwụ. Ebe a na-adọba ụgbọala bụ n'efu ma buru ibu, n'agbanyeghị na enweghị njem ụgbọ njem ọha na-aga, anyị ga-agbazite ụgbọ ala ma ọ bụrụ na anyị na-elegharị anya ma chọọ ịhụ ya. Ọ nwere ebe obibi dị elu n'oge okpomọkụ, yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta ezigbo ebe, anyị ga-ebu ụzọ. Cove a nwekwara mpaghara nke okwute na-echebe, nke na-eme ka mmiri ya dị jụụ, njirimara ọzọ ọ dị mma maka ezinụlọ nwere obere ụmụaka.
Banyere ọrụ ndị anyị nwere ike ịchọta na cove a, ha dịgasị iche iche. Ọ bụ ga-ekwe omume ịgbazite mesịa na sunbeds maka nkasi obi ka elu. Agbanyeghị, ọ bụghị ụsọ osimiri ebe ha tinyela ọtụtụ ọrụ, na-ezere iwu ụlọ ndị ọzọ ebe ọ bụ mpaghara mara mma. Pụrụ ịhụ ụfọdụ ndị na-akụ azụ n’ụlọ na e nwere obere ọdụ mmanya ebe ị nwere ike ịzụta ihe ụfọdụ. Mana enweghị ọrụ maka egwuregwu mmiri, ọ bụ ezie na ọ ka bụ obere osimiri maka ụdị ihe a.
Ihe na-atọ ụtọ na Cala Llombard
Obere oghere a bụ ebe ama ama maka ndị njem, yabụ anyị maara na ọtụtụ mmadụ ga-abịa. Agbanyeghị, ọ bụ ụsọ osimiri sara mbara nke na-agbatị azụ, n’akuku mpaghara oke osisi pine ebe anyị nwere ike ịchọta ndo. Ọ bụ ezigbo ego iji nọrọ ụbọchị ahụ n'ihi na o nwere ebe dị mma n'ihi oke ọhịa, ebe anyị nwere ike inwe ntụrụndụ picnic. Na mgbakwunye, mpaghara gbara okwute gbara ya gburugburu ebe ụfọdụ ndị nwere obi ike kpebiri ịbanye n'ime mmiri ahụ. Echiche a dabara adaba maka obi ike ma ọ na-atọ ụtọ ma anyị ga-ahụ ndị na-eme nke a n'afọ niile. N'aka nke ọzọ, ọ bụ ebe na-emighị emi nke nwere mmiri doro anya dị ka turquoise, dị ka ndị ọzọ na-achọsi ike na Mallorca, nke ga-enye anyị ohere ịme egwuregwu dị ka ịmị anụ.
Kedu ihe ị ga-ahụ na nso Cala Llombard
Ọ bụrụ na anyị ga-anọ ụbọchị na nke a Anyị ga-ahụ gburugburu ebe obibi. Ọ bụrụ na anyị etinye ọtụtụ ụbọchị na ndịda nke Mallorca anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ. Site n'obodo ruo na nke ọzọ coves na-amasị anyị na-anọ a ọma ụbọchị na osimiri.
Obodo a ọ dị naanị kilomita iri site na Cala Llombard, na-eme ka ọ bụrụ ebe dị mma ịnọ. Obodo a nwere ọmarịcha obodo ochie nke nwere mgbidi ewusiri ike na ụzọ a na-akpọ Porta Murdada. N’ụbọchị Satọdee enwere nnukwu ahịa ebe ị nwere ike ịzụta ụdị ihe niile. Na obodo e nwekwara ndị magburu onwe ụlọ oriri na ọ toụ toụ na-agbalị na-atọ ụtọ gastronomy.
Mondragó park nkịtị
Ọzọ nleta dị mkpa na Mpaghara nwere ịhụ Mondragó Natural Park. Mpaghara ae chebere na-enye ebe ị ga-ahụ flora na fauna nke gburugburu. Na mpaghara a enwerekwa otu ihe dịkarịsịrị mkpa na Mallorca niile, Cala Mondragó. Cove a sara mbara ma na-enye mmiri doro anya. Ọ bụrụ n’anyị chọrọ ịrụ ọrụ ọ bụla, anyị nwere ike ịnụ ụtọ njem njegharị dịka Punta de Ses Gavotes ma ọ bụ Mirador de Ses Fonts de N’alis. Trazọ ndị a dị mma maka ezinụlọ ma nwee ike iji ụkwụ ma ọ bụ ịnyịnya ígwè mee ya. Ọ bụ ebe mara mma mara mma na Mallorca dị nso na Cala Llombards a.
Dị nso coves
Otu n'ime Ndị a ma ama ama ama na mgbakwunye na ndị ahụ ekwurula bụ Cala d'es Moro, nke na-eru site na ịga ije na obere ụzọ si na-adọba ụgbọala. Ọ bụ ihe dị egwu n'etiti nkume. Ọzọ nke coves nwere ike na-enwe bụ Cala S'Almonia, mpaghara nwere ọnụ ọnụ ugwu, onyinyo na-enye ekele maka mpaghara osisi pine na mmiri doro anya. Ọ bụkwa nnukwu osimiri ebe ndị njem nleta ole na ole na-aga n'ihi ya, ọ bara uru ịhụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Cala Llombards na Mallorca